İmamoğlu'ndan, Gurukota Çavuşoğlu'nun Pindura kuChannel Istanbul Comment | RayHaber
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 Istanbulİmamoğlu'ndan, Minister Çavuşoğlu'nun Channel Istanbul Reply to the Comment
Pindura kune cavusoglun'siteshi istanbul hurukuro
Mushure mekutaura kwake pa "Earthquake Workhop İ, Mutungamiri weBB Ekrem İmamoğlu vakapindura mibvunzo yevatapi venhau. Imamoglu, Gurukota rinoona nezvekunze Mevlut Cavusoglu "Channel Istanbul, ichinongedzera kune" vakarova vachatsemuka vachabhururuka gungwa, "akapindura.
Emamoglu akasimbisa kuti vanhu veIstanbul vane ruzivo rweKanal pamusoro peCanal Istanbul uye vakati "Isu tinoteedzera kuti pane maitiro ari kukanganisa nyika, ecosystem, mamiriro ekunze uye kudengenyeka kwenyika mune zvese zvikamu, uye kukanganisa huwandu hwevanhu uye kugadzira renti. Ini handina basa kuti Minister vekunze, nyaya dzekunze kana zvimwewo zvinhu. "Ndiri kutarisa Istanbul, 16 mamirioni, zvichashandiswa nenyika ino."
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Mutungamiri Ekrem Imamoglu, "Earthquake Workshop" mushure mehurukuro yakapfuura pamberi pemakamera. Mibvunzo yakabvunzwa nevatori venhau kuenda kuImamoglu nemhinduro dzakapihwa neMutungamiriri weMIMM dzakadai seizvi:
Paive nemazita mune protocol iyo maziso aitsvaga; Gavhuna weIstanbul ave kuda kuve Mutungamiriri weAFAD. Wese munhu pano akakokwa, neruzivo rwangu. Kubva kuhushumiro hwakakodzera kumubati. Zvichida mumwe munhu akauya kuzomiririra mabhodhi kana kutumira; asi handizive kuti ndiani akauya, kutaura chokwadi haana kuuya. Ndinovimba vari pano. Nhasi, chinyorwa, vesaenzi vepamusoro, vanhu vane hunyanzvi, izvo zvavachawedzera. Isu tiri vanhu vanofanirwa kuteerera mamaneja uye kutora mutoro. Kunyangwe kana vasingauyi, isu tinovatumira mishumo ivo.
“NDINODA KUTI NDINOGONA”
Iwe zvakare wakataura nezve chiteshi Istanbul. Zvematongerwo enyika zvakare zviri pachirongwa. Gurukota rinowona nezvekunze, Mevlut Cavusoglu, "nguva yatichachera yekuchera ichaita maritime," aive aine mazwi akadaro. Mafungiro ako anoenderera mberi. Kanal Istanbul projekiti iri kuenda kupi? Nekuti, iyo inotonga bapiro yakatemwa uye inomerera pane iyi nyaya.
Mukutsvaga kwedu, tinoona kuti vanhu veIstanbul vane zero zero ruzivo. Channel Istanbul, 'kupenga chirongwa', 'chiteshi chinopfuura nepakati' ivo vanoziva. Mune mamwe mazwi, ivo havana ruzivo pamusoro pemhedzisiro, kukuvara kwaichaburitsa, zvakanakira uye zvakaipa pane izvo zvazvichaita. Isu tinosimbisa kuti chinyorwa chinokanganisa nyika, ecosystem, mamiriro ekunze, kudengenyeka kuri kuita zvese nekukanganisa huwandu hwevanhu nekuvakwa kwawedzera, uye tinozvisimbisa kuti hachisi chinhu chinogona kutaurwa sezvataenda kunyorovesa '. Ini handina basa kuti Minister vekunze, nyaya dzekunze kana zvimwewo zvinhu. Ini ndinotarisa Istanbul, 16 mamirioni vanhu, izvo nyika ino ichabhadhara. Saka izvi zvimwe 75 bhiriyoni, pamwe 125 bhiriyoni mapaundi zvinotsanangurwa. Akadaro cost, chii upfumi nerokuti Turkey kuiswa pokutanga nhasi? Guta rino rine mhedzisiro yei kwaro geogra uye nhoroondo yekare? Chii chinokanganisa nzvimbo dzekurima kana sango? Ndeipi mhedzisiro pahupenyu hwevanhu, traffic uye kuperera kwenzvimbo? Ndiri kutarisira izvo. Izvi ndizvo zvinondifadza. Ini ndicharamba ndichizivisa, kugovana uye kutaura.
EL MELEN ZVINOKOSHA ... "
Ndeapi mamiriro ezvinhu achangobva kuitika mumadhamu? Kuchave nekushomeka kwemvura muIstanbul? Parizvino, madamu edu achangopfuura 36 muzana yekugara. Huwandu hwekugara, hwave huri mukudzika kwemasvondo akati wandei, hwatanga kukwira kwemazuva ekupedzisira e3-4. Kwedu kuedza kwechando kunonoka; asi hatisati taziva chando. Istanbul's eerie mamiriro emvura, 2, inosanganiswa nemakore ekusanaya. Tichaona kuti kusanaya kwemvura kuchakanganisa sei dzimba dzechirimo. Izvo zvakaoma kuita kufanotaura kwechando munguva ino. Kana paine kusanaya kwegore rinouya, kushomeka kwemvura kwakatimirira pa2021, kufanoona kweshamwari dzedu. Ehe pane chimwe chinhu 2 chiri kurova pano. Chimwe chazvo ndosaka nhoroondo yemubhadharo wekuti Melen Dam ichizovhurwa 2 makore apfuura uye kuti Istanbul inogona kupihwa nemamirioni metubhiti emvura yekuchengetera mvura ichiripo. … 2040 yakapihwa vimbiso kune iyo nharaunda yatinotora guta rataisazova nematambudziko emvura kusvika 2071, kusanganisira Mr. President. Isu takasarudzwa nekutora iyo vimbiso. Naizvozvo, maitiro aya inyaya yenyika. Kana DSI ichitambura nedambudziko rekugovaniswa, tinopa yambiro masangano anozoisa uku kugoverwa uye tivakokere kunzwisisika. Iyi inyaya yakakosha. Zvirinani ndinofunga kuti Mutungamiriri anovimbisa uye anovimbisa “Hatizove nematambudziko emvura kusvika 2040, 2071. Isu takagadzirisa dambudziko rese uz tinokoka zvese masangano nemasangano kuti vatore mutoro wekuzvipira. Panguva ino, 2 hazvireve kuti hapazovi nematambudziko emvura mune ramangwana, sezvo isu tinotarisira kuti hakuzove nematambudziko emvura pagore. Pamusoro peMeren Dam rakakomba, mapurojekiti edu ekuchengetedza uye kugadzira zviwanikwa zvemvura ari kuenderera mberi. Tichava nemusangano wemvura muna Ndira. Isu tora icho ipapo. Asi kutanga kwezvose, ngatitaure kuti; Icho chokwadi chekuti Kanal Istanbul purojekiti ichaparadza mabheseni emvura akapoteredza 30 humwe humwe humbowo hwekuti haina kukosha uye ine njodzi sei kuIstanbul. Ngatisimbisei zvakare.
HANDI KUTI NDICHAZVIDZE ISHENYU DZENYAYA ”
Vamwe vevanhu vange vachishanda munzvimbo ino yekudengenyeka kwenguva yakareba vakafadzwa nevezvenhau nezvekuti sei vasina kubatanidzwa mumusangano uyu neEMM manejimendi. Iwe unoziva nezve izvi zvekukoka uye uchave neshoko here?
Ndiani akakokwa semameya, anga asiri… Ini handisi mutseki kana kurudyi kuve munzvimbo dzesainzi. Ngatitaurei izvi kamwe chete. Hapana akakokwa. Zviri zvekuve mutauri. Reaction inoratidzwa ... Iyo sainzi ine zita rinotaurwa inoshandawo kushanda nedhorobha redu mune dzimwe ndima. Semuenzaniso, ini ndoziva kuti İSKİ yakavapa kudzidza. Naizvozvo, hapana masayendisiti muIstanbul anofanira kugara kunze. Inogona kunge isina kukwana. Tine masayendisiti mazhinji. Haasi munhu wese anogona kuve mutauri. Asi munhu wese anofanirwa kuve nechekuita mukuita uku. Tiri kumisikidza mapuranga kuona izvi. Kana kukanganisa kwakaitwa kwavari vakatotaurira shamwari yedu 'tinokumbira ruregerero' akadaro. Asi haafanirwe kusarudza kusauya nekuti ini ndakanga ndisingatauri sesainzi. Ndinovimba nhasi kana mangwana kuve ivo pachavo yepamusoro nhanho yekutora chikamu uye kugovana neruzivo rwunopa maitiro. Kwete chete kwavari, zvirokwazvo, tinokoka munhu wese mune iyi pfungwa. Kushaiwa kunobviswa. Izvi hazvisi zvekutanga kana zvekupedzisira. Isu tichagara tichibatanidza nzvimbo uye maitiro atichataura pamusoro pokudengenyeka kwakadai munguva yega yeIstanbul. Nekuti chinyorwa chedu chekutanga kudengenyeka.
Mubvunzo pamusoro peGurukota Arslan Railways…
"Kutendeudzira Adana Metro kuUshumiri"
Gurukota ra “Signaling is Sine qua non”…
Gürer anobva ku CHP Akabvunzwa nezve Niğde Ankara Motorway Project…
Meya Kocaoğlu's Response to Tramway Criticism
Şengül's AKP yakati 'Tichasimudza iyo tram' Sözler
3 kubva kubazi rezvekutakurwa. Uori paAirport…
Asingamisi kupinda nhandare kubva kwese kuKocaeli
Mutungamiri Arslan, kushanda pamugwagwa unoenda kuCanal Istanbul wakakwana
Minister Arslan's 3. Airport, FSM Bridge uye Canal…
Minister Arslan: "Digging Channel Istanbul Mwaka Ino"
Mutungamiri Arslan 'Channel Istanbul' Tsanangudzo